သားငယ်လေးနှစ်ယောက်ကို အရမ်းချစ်သလို သမီးကြီးလေးကိုလည်း မလျော့တဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ ထပ်တူချစ်ပေးတဲ့ ဖေဖေထူးအယ်လင်း - TGI Daily News
အဆိုတော်ကြီးထူးအယ်လင်းကတော့ တေးသီချင်းလောကမှာ နေရာတစ်နေရာကနေရပ်တည်နေပြီး အသံပါဝါကောင်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နော်။ထူးအယ်လင်းရဲ့အသံကို ပရိသတ်တွေက အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ကြလို့ သူ့ရဲ့သီချင်းတိုင်းက အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးအယ်လင်းက လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးအယ်လင်းတို့အဖွဲ့က ပရဟိတအဖွဲ့တွေသိပ်မရောက်ကြတဲ့ နေရာဒေသတွေအထိ ခက်ခက်ခဲခဲသွားပြီးတော့ ကူညီကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးအယ်လင်းက ‌ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သားနှစ်ယောက်နဲ့သမီးကြီးလေးကိုလည်း အားတိုင်းအချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ထူးအယ်လင်းရဲ့ကလေးသုံးယောက်လုံးကလည်း ချစ်မွေးအပြည့်ပါကြလို့ လူချစ်လူခင်ပေါများကြပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ထူးအယ်လင်းက”ဒါ အယ်ကြီးကို ချည်နိုင်တဲ့ ချုပ်နိုင်တဲ့ ကြိုးတွေ…. သမီးကြီး ဖြူဖြူစင်စင်လင်း(ခ)နော်ဘားဘီဘွဲ့မှူးဖေါ၊ သားကြီး မြူးဇစ်လင်း(ခ)လင်းပီး၊ သားငယ် မင်းဇင်လင်း(ခ)ရှန်းဟင် ကျွန်တော် ကလေးသုံးယောက်ဖေဖေဗျ ဟဟ ဟူးးးးး ဇ”ဆိုပြီး ကလေးသုံးယောက်လုံးက သူ့ရဲ့သံယောဇဉ်လေးတွေဖြစ်တာကို ရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးအယ်လင်း‌ကတော့ ဖခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ကလေးသုံယောက်လုံးကို ထပ်တူထပ်မျှချစ်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
Source and Photo Credit:Htoo El Lynn
သားငယျလေးနှဈယောကျကို အရမျးခဈြသလို သမီးကွီးလေးကိုလညျး မလြော့တဲ့မတ်ေတာတှနေဲ့ ထပျတူခဈြပေးတဲ့ ဖဖေထေူးအယျလငျး
အဆိုတျောကွီးထူးအယျလငျးကတော့ တေးသီခငျြးလောကမှာ နရောတဈနရောကနရေပျတညျနပွေီး အသံပါဝါကောငျးကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျနျော။ထူးအယျလငျးရဲ့အသံကို ပရိသတျတှကေ အရမျးကွိုကျနှဈသကျကွလို့ သူ့ရဲ့သီခငျြးတိုငျးက အောငျမွငျနတောဖွဈပါတယျ။ထူးအယျလငျးက လကျရှိမှာဆိုရငျတော့ သူ့ရဲ့အဖှဲ့သားတှနေဲ့အတူ ပရဟိတအလုပျတှကေို စှမျးစှမျးတမံလုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။
ထူးအယျလငျးတို့အဖှဲ့က ပရဟိတအဖှဲ့တှသေိပျမရောကျကွတဲ့ နရောဒသေတှအေထိ ခကျခကျခဲခဲသှားပွီးတော့ ကူညီကွတာဖွဈပါတယျ။ထူးအယျလငျးက ‌ပြျောရှငျစရာမိသားစုလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး သားနှဈယောကျနဲ့သမီးကွီးလေးကိုလညျး အားတိုငျးအခြိနျပေးဖွဈပါတယျနျော။ထူးအယျလငျးရဲ့ကလေးသုံးယောကျလုံးကလညျး ခဈြမှေးအပွညျ့ပါကွလို့ လူခဈြလူခငျပေါမြားကွပါတယျ။
အခုဆိုရငျတော့ ထူးအယျလငျးက”ဒါ အယျကွီးကို ခညျြနိုငျတဲ့ ခြုပျနိုငျတဲ့ ကွိုးတှေ…. သမီးကွီး ဖွူဖွူစငျစငျလငျး(ခ)နျောဘားဘီဘှဲ့မှူးဖေါ၊ သားကွီး မွူးဇဈလငျး(ခ)လငျးပီး၊ သားငယျ မငျးဇငျလငျး(ခ)ရှနျးဟငျ ကြှနျတျော ကလေးသုံးယောကျဖဖေဗြေ ဟဟ ဟူးးးးး ဇ”ဆိုပွီး ကလေးသုံးယောကျလုံးက သူ့ရဲ့သံယောဇဉျလေးတှဖွေဈတာကို ရေးသားလာတာဖွဈပါတယျ။ထူးအယျလငျး‌ကတော့ ဖခငျမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ ကလေးသုံယောကျလုံးကို ထပျတူထပျမြှခဈြတဲ့ ဖခငျတဈယောကျဖွဈပါတယျနျော။